MoeMaKa Burmese News & Media | USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။ ရန်ကုန် ဆက်သွယ်ရေး – အမှတ် ၂၅၄၊ ပထပ်၊ လမ်း ၄၀၊ ကျောက်တံတား၊ ရန်ကုန်။ (ဖုံး – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈) ဖြန့်ချိရေး – ဆိပ်ကမ်းသာစာပေ – အမှတ် ၁၃ / ၃၈ လမ်း။ ပလာဇာဈေးသစ် ။ ၀၉ ၇၈၆၈၃၇ ၃၀၅ / ၀၉ ၉၆၃၆၉၉၈၃၄ | Page 889
>Burmese Community in Japan boycott Junt'a Propaganda's Actors
>ဒေၝင်းနီ - ခဵစ်သူမဵားရဲ့ ရေဆန်
>Letters from Michigan - 64
>Thee Lay Thee in LA, First Event in US
> သီးလေးသီးနဲ့ ဆေးရောင်စုံ အငြိမ့်အဖွဲ့ အမေရိကန်ပြည် ပထမဦးဆုံးပွဲအဖြစ် အယ်လ်အေမှာ ကပြမည် မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ ဒီဇင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၀၈ ၂၀၀၇ သံဃာ့အရေးတော်ပုံနောက်ပိုင်းတွင် မြန်မာပြည်တွင်းက ပရိသတ်ကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့...
>Nyan Oo Maung’s poem 01
> ဒီခန္ဓာဉာဏ်ဦးမောင်ဒီဇင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၀၈ ဟိုတနေ့က အမေပါးတဲ့ မေတ္တာစကား ကြားလိုက်ရတယ် နားတွင်မက နှလုံးသားထိ ပျံ့နှံ့စွဲငြိ ချိုသာဘိ။ ဟိုတနေ့ အဖေပါးတဲ့ အားဆေးစကား စားလိုက်ရတယ် လျှာတွင်မက တခန္ဓွာလုံး ပျံ့နှံ့ဆုံးထိ...
>Cartoon Maung Yit – Enemy of the Enemy is ….
> Cartoon Maung Yit – Enemy of the Enemy is …. December 15th, 2008 No tags for this post....
>Than Soe Hlaing – Fire Out Break in Burma, disaster for people
> လူထုအတွက် မီး၊ အာဏာပိုင်အတွက် အခြားအဓိပ္ပါယ် သန်းစိုးလှိုင် ဒီဇင်ဘာ ၁၅၊ ၂၀၀၈ x x x ဈေးရောင်းသူ၊ ကုန်သည်များအနေဖြင့် တဘက်မှာ အာဏာပိုင်ကိုလည်း ကြောက်ရ၊ မတန်တဆ ဆိုင်ခန်းတန်ဘိုးလည်းပေးရသည့်...
>Mar Mar Aye Foundation Fund Raising Event
> မာမာအေး ဖောင်ဒေးရှင်း၏ ပထမဆုံး ရန်ပုံငွေပွဲ ပြုလုပ်ပြီးစီးမိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ဒီဇင်ဘာ ၁၅၊ ၂ဝဝ၈ တေးသံရှင်မာမာအေး နှင့် ဂီတမြတ်နိုးသူများ စုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားသည့် ‘မာမာအေး ဖောင်ဒေးရှင်း’၏ ပထမဆုံး ရန်ပုံငွေ တေးဂီတဖျော်ဖြေပွဲကို...
>May Nyane – Chaw Ei Thein & Her Enclosed Dark Space
> ပိန်းပိတ်အမှောင်၊ ချောအိသိမ်း နဲ့ … မေငြိမ်း ဒီဇင်ဘာ ၁၅၊ ၂၀၀၈ အဲဒီညမှာ ကျမကိုယ်တိုင် ပိန်းပိတ်နေတဲ့ အမှောင်တိုက်ထဲ ပြန်ရောက်သွားပါတယ်။ အဲဒီ အမှောင်တိုက်ထဲကနေ.. ကျမ ကိုယ်လွတ်ရုန်းခဲ့တာ ခုဆို...
>Bush & Boots
> အမေရိကန်သမ္မတကို အီရတ်က ဖိနပ်နှင့်ပစ် ဓာတ်ပုံသတင်း ဒီဇင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၀၈ ယနေ့ နေ့ခင်း၊ အီရတ်နိုင်ငံ၊ ဘက္ကဒပ်မြို့တော်၊ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတခုတွင် အီရတ်သတင်းထောက်ဆိုသူ တဦးက ဘွတ်ဖိနပ် ၂ ဖက်နှင့် သမ္မတ...
>Dec 14th 2008 – Sunday WeeklyRadio Program
> မိုးမခရဲ့ ရေဒီယိုချစ်သူများ ဆစ်ဒနီ ဒီဇင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၀၈ ဒုက္ခကင်းဝေး ခရစ်ယာန်တေး – ဂီတလုင်မောင်ကိုကို သတင်းပဒေသာ၊ သီချင်းပဒေသာ အဝေးကပေးစာတစောင် – ယာတောက သာဗျော ဦးသန့်ရာပြည့် နဲ့...
>Mar Mar 257
> ပြောပြစရာတွေလည်း တပုံကြီးရှိသေးတယ် (၂၅၇)မြန်မာဂီတသည် တို့ဂီတမာမာအေးဒီဇင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၀၈ သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါစရှင်- မာအေးချစ်တဲ့ သောတရှင်တွေ ဂီတ၀ါသနာရှင်တွေအားလုံး မာအေးရဲ့ အသံလေး ကြားရတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ချမ်းသာကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်။...
>Htain Linn – U Thant
> နိုင်ငံရေးနဲ့ စာပေအနုပညာ (၁၈)ငြိမ်းချမ်းရေး ဗိသုကာ ဦးသန့်ထိန်လင်းဒီဇင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၀၈ အာရှတိုက်ရဲ့ ပထမဆုံး ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား ဦးသန့်ဟာ လာမယ့်နှစ်ဆန်း ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့မှာ အသက်...
>Kyi Maung Than poem – 02
> မျှော်လင့်ခြင်းကြည်မောင်သန်းဒီဇင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၀၈ သူမကကျကွဲသွားတဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ကျနော်ကမပျော်ရွှင်တဲ့ … လှိုင်းလုံးကြီးတွေ တလုံးပြီးတလုံးဖြတ်မောင်းသွားတာကိုကျနော် ချောင်းကြည့်နေမိရဲ့ကလေးတယောက်ရဲ့ ဦးခေါင်းထဲကိုရောင်စုံခဲတံတွေ ထိုးထည့်ခဲ့ကြတယ် ငွေနဲ့ အညှို့ခံရတဲ့ဘ၀ငွေနဲ့ အညှို့ခံရတဲ့ အချိန်ကာလတစ်ဆို့နေတဲ့ လည်ပင်းထဲကိုရှောရှောရှူရှူ သီချင်းတပုဒ်လောက်ဘယ်တော့များမှ...
>Kyi Maung Than interview
> မိစ္ဆာဝိုင်ကို သောက်ကြည့်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ကဗျာဆရာကြည်မောင်သန်းနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း အောင်ဘညို ဒီဇင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၀၈ ‘ကဗျာတွေ ရှင်ချင်ရင် ကဗျာဆရာတွေ သေဖို့သာပြင်’အေးရာအေးကြောင်းကဗျာ (၁၉၈၈) မှ ကဗျာဆိုတာ ပဟေဠိဝှက်တမ်းကစားနေတာမဟုတ်ပါဘူး၊ ဆုံးမစာလိုလို နိတိလိုလို...
> တက်ဆင်ထောက်ခံသူများ ဘန်ကောက်တွင် စုဝေးဆန္ဒပြ ဓာတ်ပုံသတင်းဒီဇင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၀၈ယမန်နေ့က ပြည်ပရောက်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းတက်ဆင်အား ထောက်ခံသူများက ဆန္ဒပြပွဲတခုကို ဘန်ကောက်မြို့တွင် ခြိမ့်ခြိမ့်သဲ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ဘန်ကောက်အားကစားရုံကြီးတွင် ရာထူးမှဖယ်ရှားခံခဲ့ရသူတက်ဆင် ပေးပို့ခဲ့သော ဗီဒီယိုမိန့်ခွန်းကို ကြားနာခဲ့ကြသည်။ ရုပ်အလောင်းတခုကို...
> ဦးနေ၀င်းသမီး ဒေါ်စန္ဒာဝင်း ၆နှစ်ကြာအကျယ်ချုပ်မှပြန်လွတ်ဓာတ်ပုံသတင်းဒီဇင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၀၈ယမန်နေ့က အာဏာရှင်ဟောင်းဦးနေ၀င်း၏သမီး ဒေါ်စန္ဒာဝင်း အကျယ်ချုပ်မှ လွတ်မြောက်လာကြောင်း သူမ၏ မိတ်ဆွေများ၊ ဆွေမျိုးများက ပြောပြသည်။ အထက်ပါပုံမှာ တချိန်က ရန်ကုန်မြို့ အမျိုးသားပြတိုက်တွင် ပြပွဲတခုတက်ရောက်စဉ်...
>Aung Way – 20
> ပဉ္စမမြန်မာနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ခန်း (၂၀) အောင်ဝေး ဒီဇင်ဘာ ၁၃၊ ၂၀၀၈ ‘မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းမှာတော့ မုန်တိုင်းမိုးတိမ်တွေက ဆင်နေဆဲပါပဲ’ ကျနော်တို့ ဧရာဝတီစည်းရုံးရေးခရီးစဉ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောခဲ့ဖူးတဲ့ အလင်္ကာစကား တခွန်းပါ။ ကျနော်တို့အမှတ်ရနေကြတယ်။ ပုသိမ်အကျဉ်းထောင်ထဲမှာလည်း နဝတရဲ့ မုန်တိုင်းမိုးတိမ်တွေက...
>mobile phone inavery Burmese way
> မြန်မာနည်းမြန်မာ့ဟန် မိုဘိုင်းဖုန်းသန်းစိုးလှိုင်ဒီဇင်ဘာ ၁၃၊ ၂၀၀၈ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တခါသုံး ဂျီအက်စ်အမ် ဆင်းကဒ် (GSM Sim Card) များကို ဒေါ်လာ ၁၀၊ ၂၀ နှင့်ညီမျှသည့် အက်ဖ်အီးစီဖြင့် ရောင်းချပြီဟု...
> ချောအိသိမ်း၏ တကိုယ်တော်ပန်းချီပြပွဲ တတိယခြေလှမ်းဓာတ်ပုံသတင်းဒီဇင်ဘာ ၁၃၊ ၂၀၀၈ ပန်းချီဆရာမချောအိသိမ်း၏ တတိယအကြိမ်မြောက် တကိုယ်တော်ပန်းချီပြပွဲဖိတ်စာ။ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်းမိုင်မြို့တွင် ဆယ်ရက်ကြာ ပြသမည့် အဆိုပါပြပွဲကို ဒီဇင်ဘာ ၁၄ (တနင်္ဂနွေနေ့) ညနေ ၆ နာရီတွင်...
>editor Ko Aung San
> အယ်ဒီတာ ကိုအောင်ဆန်းတင်မိုးဒီဇင်ဘာ ၁၂၊ ၂၀၀၈ သတ္တိရှိရှိ၊ တာဝန်သိသိစာ၏၀န်တာ၊ ငါ့ဝန်တာဟုတာဝန်သိစိတ်၊ ခြသေ့င်္စိတ်နှင့်အင်္ဂလိပ်ကျောင်းအုပ်ရှေ့က အယ်ဒီတာ။ ခြိမ်းခြောက်သော်လည်း မဖြုန်ချော့မြှောက်သော်လည်း မတုန်အိုးဝေအယ်ဒီတာ၏ဂုဏ်။ ‘ငရဲခွေး’ ကိုရေးသူဖော်ခိုင်း၊ ရာဇ၀င်ရိုင်းရော့မည်ခြောက်တိုင်းမကြောက်၊ ဒူးမထောက်သည်ရဲရဲတောက်အယ်ဒီတာ။ ကျောင်းထုတ်ခံ၍အမှန်ဘက်က၊ ရပ်တည်ပြသည်သမဂ္ဂအယ်ဒီတာ၊...
>Maung Sein’s cartoon – 02
> ကာတွန်းမောင်စိန်ဒီဇင်ဘာ ၁၂၊ ၂၀၀၈ No tags for this post. Related posts No...
> ထိုင်းနိုင်ငံမှ အ၀တ်မဲ့မြန်မာပန်းချီပြပွဲ ဓာတ်ပုံသတင်းဒီဇင်ဘာ ၁၂၊ ၂၀၀၈ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်းမိုင်မြို့ The Naked Truth ပန်းချီပြပွဲမှ ဆရာမဒေါ်စန္ဒာခိုင်။ ယနေ့ညနေပိုင်းက စတင်သည့် အဆိုပါ တကိုယ်တော်ပြပွဲတွင် ဒေါ်စန္ဒာခိုင်၏လက်ရာ nude painting...
> တခုသော အသုဘဉာဏ်ဦးမောင်ဒီဇင်ဘာ ၁၂၊ ၂၀၀၈ (သင်ယူနေတဲ့ “သက်ကြီးရွယ်အိုဆိုင်ရာ စိတ်ပညာအခန်း” ဆရာမက စာသင်ရာသီပိတ်အဖြစ် ‘ကိုယ့်မသာ ကိုယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း’ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ရသစာတမ်းတိုတပုဒ် ရေးခိုင်းတယ်။ ဒီခေါင်းစဉ်က အတန်းသားတွေအတွက် အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်လည်း သင်္ခန်းစာနဲ့...
>US president meets with bloggers
> အမေရိကန်သမ္မတ ဘလော်ဂါများနှင့် စကားဝိုင်းဖွဲ့ ဓာတ်ပုံသတင်း ဒီဇင်ဘာ ၁၂၊ ၂၀၀၈ပြီးခဲ့သည့် ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်နေ့ (ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေးနေ့) က အမေရိကန်သမ္မတ ဂျော့ဒဘလျူဘုရ်ှသည် သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုးဝါးသော နိုင်ငံများမှ ဘလော်ဂါများနှင့် အိမ်ဖြူတော်တွင်...
>Far from Home: 20 years in Exile
> သူပုန်၊ သတင်းထောက်၏ အတွေ့အကြုံစာအုပ် ထွက်ပြီ မိုးမခအထောက်တော် ၆ဒီဇင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၀၈ လက်နက်ကိုင်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဘ၀မှ စာနယ်ဇင်းသမားအဖြစ် ကူးပြောင်းလာသူတဦး၏ အတွေ့အကြုံဆောင်းပါးများကို စုစည်းထားသည့် စာအုပ်သစ်တအုပ် စတင်ဖြန့်ချိလျက်ရှိသည်။ ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့အသံ (DVB) အကြီးတန်းသတင်းထောက်...
>Burmese in Singapore marked 60th Human Rights Day
> စင်္ကာပူက မြန်မာများ လူ့အခွင့်အရေးနေ့ နှစ် ၆၀ ကျင်းပ ဓာတ်ပုံ သတင်း၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၀၈ No tags for this post. Related posts...
> ဒေါ်စန္ဒာခိုင်၏လက်ရာများ မြန်မာပြည်ပြင်ပတွင် ပြပွဲတင်မည် မိုးမခအထောက်တော် ၃၊ ၂၀၀၈ ဒီဇင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၀၈ ပန်းချီဆရာမ ဒေါ်စန္ဒာခိုင်၏ တကိုယ်တော် ပန်းချီပြပွဲကို ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်းမိုင်မြို့တွင် ယခုလအတွင်း ပြုလုပ်မည်ဟု သိရသည်။...
>D-Blade in Chiang Mai
> ဇင်းမယ်မှ မြန်မာစတိတ်ရှိုး ဓာတ်ပုံသတင်းဒီဇင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၀၈ အိန်ဂျယ်တယော ထူးအယ်လင်း၏ ခံစားချက်အပြည့်သီဆိုဟန်။ ယမန်နေ့ညက မြန်မာပြည်မှ D-Blade တီးဝိုင်း နှင့် နာမည်ကျော်အဆိုတော်များ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်းမိုင်မြို့(ဇင်းမယ်မြို့)တွင် တင်ဆက်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ ချင်းမိုင်ရော...
>Myanmar Electronics Act – not to send info to outside World
>Int HR Day
> ကာတွန်း – ကလျာမိတေဒီဇင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၀၈ No tags for this post. Related posts No related posts.
>Dec 7th 2008 – Sunday Weekly Radio Program
> မိုးမခရဲ့ ရေဒီယိုချစ်သူများ ဆစ်ဒနီဒီဇင်ဘာ ၇၊ ၂၀၀၈အို ဘုရားသခင် – ဦးပန်တျာ၊ ရတနာဦးသတင်းပဒေသာဆစ်ဒနီတလွှား သတင်းစကား/Hip Hopတေးများ(Home loan ဒါရိုက်တာဦးညွန့်ဝေ)ဆစ်ဒနီမြို့မြန်မာဆရာဝန်များအသင်းရဲ့ မြန်မာပြည်လေဘေး အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်(ဒေါက်တာအေးအေး)တန်ပါ့မဖုရား – မောင်မောင်ကြီးဇာဂနာရဲ့ ကျူရှင်ဆရာဟာသစလေဦးပုည...
> အိုးပင်းသြဖစ်စ် – အခမဲ့ရုံးသုံးအပျော့ထည် သုံးစွဲသူ ၁၀ သန်းရှိပြီ၊ မြန်မာစာစနစ်လည်း ရနိုင် လောကဓာတ်ခန်း သာဂိ ဒီဇင်ဘာ ၉၊ ၂၀၀၈ အင်တာနက်ကတဆင့် အခမဲ့ ကွန်ပျူတာစနစ်မျိုးစုံရရှိနိုင်တဲ့အထဲမှာ ဆန်းန်မိုက်ခရိုက ထုတ်ဝေဖြန့်ချိတဲ့...
Page 889 of 947«1...887888889890891...947»